Minnesota: Macallimiin iyo arday Soomaaliyeed oo xusay Taariikhda Bisha Dadka Madow “Black History Month” markii u horeysay.
Dalka maraykanka sanadwalba bisha February oo dhan waxaa laga xusaa taariikhda dadka madaw sababta looga gol leeyahay waa in la muujiyo halgankii ay soo galeen iyo wixii ay dalkan ku soo kordhiyeen. Sida la wada ogsoon yahay dadka madow ee ku nool dalka maraykanka mar awoowayaashood badankood waxay ahaayeen addoon la wada leeyahay oo aan xor ahayn. Beerihii iyo warshadahii ay ka shaqayn jireen maalin walba saacado badan mushaar lama sii jirin markii danbe oo la xoreeyay waa la takooray, meeshay rabaan ma degi karin waxay rabaanna ma samayn karin oo xattaa ma codeyn karin.
Nidaamkii lagula dhaqmayay ayaa u sabab ah in ay weli soo gaari la’ yihiin deriskoodii caddaa xagga dhaqaalaha, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo isku xirnaashaha qoyska ayadoo ay weliba jirto cunsuriyayn lagu hayo. Hadaanu jirin midab takoor maxaay ku dhacday in ay xabsiyada ku bataan si aan saamigooda ahayn, maxaa ku badiyay shaqo la’aanta, maxaa ku yareeyay awooda siyaasadda iwm.
Cali Yusuf Ow Muse
Dadka aqoonta u leh cilmiga bulshada ayaa aaminsan in waxii soo maray dadka madow ee America oo weliba ah dad laga badan yahay in aanay sahlanayn in ay ka soo kabsadaan iyo in ay qaadan karto boqolaal sano oo danbe.
Haddaba waxaa sahal ah qofkii aan ogeyn waxa dadkaas la soo mariyay ama halganka ay soo mareen oo maanta dad badan oo kale ku raaxeeystaan uu u maleeyo inay yihiin dad caajislowyaal ah oo ayagaa diiday in ay ka faa’iidaystaan furasadah wadanka yaal.
Waxaa muhiim ah in lagu baraarujiyo aradad Soomaaliyeed oo madow ah inay ogaadaan taariikhdii ay soo mareen dadka madaow, cilmigii ay ku soo kordhiyeen wadanka, iyo wanaagga dadka madow ee deriska kula ah Minnesota.
Macalin Dahir Jibriil iyo macalin Cusman Cali oo labadaba wax ka dhiga Dugsiga Sare ee Edison ahna macalimiin goblka laga qadariyo ayaa barnaamijkan isku soo duba riday. Waxaa kale oo ka soo qayb galay qaar ka mid ah madaxda African Americanka ee Minnesota waxaana ka mid ahaa:
Mr. AL McFarlane
Mr. Brett Buckner
Presidents of NAACP – Minneapolis chapter Mr. Brett Buckner iyo kuxigeenkiisa Shermann Petterson Jr. labadaba waxay ku nuux nuuxsadeen in ay ku faraxsan yihiin imaanshada Soomaalida ee Minnesota iyo in la iskaashado.
President/Editor in Chief of Insight News.com, Inc. Mr. AL McFarlane oo yiri markii iigu horeysay oo la i yiri African-baad tahay waan xasuustaa oo maba ogayn in aan ku faani karo in aan ka soo jeedo qaarad weyn oo la yiraahdo Africa maanta nasiib ayaan u yeeshay in aan ka soo qayb galo xaflad Soomaaliyeed oo lagu xusayo taariikhda dadka madow oo ka dhacaysa Minnesota.
Mr. Al oo loo yaqaan codka dadka mdaow ee Minnesota waxaa uu qabtaa talaado kasta dood furan oo aad looga soo qayb galo oo lagaga hadlo danaha dadka madow ee Minnesota waxaa kale oo uu leeyahay TV iyo Radio iyo Journaalka ugu afdheer ee ay leeyihiin madowga Minnesota.
Halkaas waxa ay hoy u tahay oo talaado kasta ku kulma dhamaan dadka madow ee ka kala yimid Africa, Noth America, South America, Careebiyanka iyo dadka kale ee laga badab yahay.
Mr. Al waxaa uu hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay ardada Soomaaliyeed oo uu kula dardaarmay inaysan iloobin afkooda, diintooda, dhaqankooda, iyo ixtiraamkii ay u hayeen dadka waaeyn.
Shermann Petterson Jr
Mr. Benjamin Mche
Waxaa ku xigay ninka iska leh shabakadda ugu weyn ee taariikhda dadka madow oo la yiraahdo Mr. Benjamin Mche. Waxaa uu halkaas ku ururiyay taariikhda iyo culuumta iyo halgankii dadka madow. Waxaa ka fiirsan kartaa African American Registry oo aad ku raadin karto www.aaregistry.com weliba haddii aad gasho search by category waxaad helaysaa taariikh badan sida siyaasadda, sayniska, iwm.
Waxaa kale oo halkaas ka hadlay mudane Cali oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan Soomaalida Minnesota lehna Tvga Bulsho asagoo ardada ku booriyaya inay ka faa’iidaystaan waayo aragnimada martida meesha ka hadashay.
Ardaydii Soomaaliyeed ayaa u muuqatay kuwo ka faa’iidaystay martidii soo booqatay maalintaas muhiinka ahayd ee February 27. Macalin Dahir Jibriil iyo Macalin Cali Cusmaan ayaa u mahad celiyay martida ardaydana kula dardaarmay inay taariikkdooda iyo afkooda iloobin.
Waxaa soo qoray Maxamuud Nuur Wardheere oo xafladda ka qaybgalay
Faafin: SomaliTalk.com | March 2, 2004
Xubno Soomaaliyeed oo ka Qayb Qaatay Maamuuska Dhalashada Hogaamiyahii dadka madaw ee Maraykanka Dr. Martin Luther King Jr. Guji.....
Booqasho isugu jirta dalxiis iyo waxbarasho oo ay arday Soomaaliyeed ku tageen xarunta gobolka Minnesota (State Capitol) Guji...
Ardayda Dugsiga Sare ee Edison oo ka Qalin-Jebiyey Guji..
Ardayda Soomaaliyeed ee Ka Qalin Jebinaya Dugsiga Sare ee Edison oo Buuxiyey Derejooyinka ugu Sareeya Guji...
Bidix: Martin Luther King III, Maxamuud Nuur Wardheere:
Ardayda ka qalin jebiyey Edison
60 Soomaali ah ayaa kamid ah 122 arday ee ugu buundada Sareeya Dugsiga Sare ee Edison Guji....